सलमान खानलाई जेलमा पार्ने कृष्णसार कस्तो? नेपालको कानुन लागेको भए १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्थ्यो :: PahiloPost
6th April 2018 | २३ चैत्र २०७४
२० वर्षअघि मारिएको भनिएको दुईवटा कृष्णसार प्रजातिको वन्यजन्तुको लागि जोधपुर अदालतले बलिउड हिरो सलमान खानलाई दोषी ठहर गरी ५ वर्ष कैद र केही जरिवानाको सजाय बिहीबार सुनायो। भारतीय कलाकारहरुले कानुनको सम्मान गर्ने भने पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्ने आशा पनि गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि आवेदन गर्न पाउने छन्। उनका सहयोगी मानिएका अन्य कलाकारहरु भने निर्दोष ठहर भए। कम्तिमा धरौटीमा ननिस्केसम्म सलमान भने जेलमा नै रहने छन्।
२० वर्षअघि सलमान खान 'हम साथ साथ है' फिल्मको को सुटिङको क्रममा राजस्थानको जोधपुर पुगेका थिए। रातको समयमा निजी कारबाट कृष्णसारलाई गोली हानिएको र पछि भागेको बताइन्छ। स्थानीय विषनोई समुदायले यो प्रजातिलाई १५ औँ शताब्दीका आफ्ना गुरुको अवतार मानेर पूजा गर्छन्। स्थानीय पूनमचन्द विषनोईले आफूले बन्दुकको आवाज सुनेको र गाडीको नम्बर समेत टिपेकोबताएका थिए। सोही प्रमाणहरूको आधारमा बिहीबार सो निर्णय सुनाइएको थियो।
कृष्णसार मृग होइन, तर एन्टिलोप हो। मृगहरुको भालेको सिङ हाँगा परेको हुन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष फेरि रहन्छ। तर भाले एन्टिलोपको सिङ दुई वटा* मात्र हुन्छ र जीवनभर स्थायी हुन्छन्।
भारतीय वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार अनुसूची १ देखि ४ सम्म सूचिकृत वन्यजन्तुलाई कसैले पनि सिकार गर्न नपाउने उल्लेख छ। कृष्णसारलाई अनुसूची १ मा राखिएको छ। कृष्णसार मारेमा वा कुनै नोक्सान पुर्‍याउने कोशिश गरेमा १ देखि ६ वर्षसम्म कैद र कम्तिमा ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
२०६५ सालदेखि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकास्थित खैरापुरमा रहेको कृष्णसारको प्राकृतिक वासस्थानलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्न थालेको हो। तराईको एकमात्र संरक्षण क्षेत्रको रुपमा रहेको 'कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र' १६ दशमलव ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी कृष्णसार रहेका छन्।
यिनको दीर्घकालीन संरक्षणको लागि भनेर विभिन्न ठाउँबाट शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जको हिरापुर फाँटामा स्थानान्तरणसमेत गरिएको छ। ५१* हेक्टर क्षेत्रलाई घेरेर विभिन्न स्थानबाट कृष्णसार लगेर राखिएको छ। प्रजनन् गराई प्राकृतिक वासस्थानमा छोड्ने 'राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग'को योजना रहेको छ। यसको लागि कार्ययोजना बनाई 'राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष'ले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
(लेखक प्रकृतिका साथीहरु संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
सलमान खानलाई जेलमा पार्ने कृष्णसार कस्तो? नेपालको कानुन लागेको भए १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्थ्यो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।